शैक्षिक सत्र सुरु, सामुदायिक विद्यालयमा बढे विद्यार्थी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
शैक्षिक सत्र सुरु, सामुदायिक विद्यालयमा बढे विद्यार्थी
असार १५ सम्म भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण, त्यसपछि वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन
असार २, २०७८ सुदीप कैनी
काठमाडौँ — कोरोना महामारीका बीच मंगलबारबाट विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । कक्षामा भौतिक उपस्थिति गराएर पढाउन सम्भव नभएका जिल्लामा विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई वैकल्पिक विधिबाट जोड्नुपर्नेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि असार १ देखि विद्यालयहरूमा भर्ना प्रक्रिया थाल्न आह्वान गरेको थियो । असार १५ सम्म विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्न र उनीहरूलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले बताए । ‘अहिले तत्काल विद्यालय खोलेर पठनपाठन थालिहाल्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट जोड्ने काम गर्नुपर्छ ।’
केन्द्रले असार दोस्रो सातासम्म अघिल्लो शैक्षिक सत्रको नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी भए ती काम सक्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘नतिजा प्रकाशनपछि नयाँ कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको अभिलेख राख्ने काम गर्नुपर्छ,’ महानिर्देशक अर्यालले भने, ‘बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक दिएर सिकाइ निरन्तरताका लागि वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन थाल्नुपर्छ ।’ सरकारले १० कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक नि:शुल्क वितरण गर्दै आएको छ । यो वर्षदेखि कक्षा ९ सम्म रंगीन पाठ्यपुस्तक दिन लागिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, वितरण र गुणस्तरको अनुगमन गर्न देशभरका स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई आग्रहसमेत गरेको छ । पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि स्थानीय तहहरूमा अनुदान पठाएको छ ।
चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने पाठ्यपुस्तक क्षेत्रीय डिपोहरूमा पुर्‍याइसकिएको जनक शिक्षाले सामग्री केन्द्रले जनाएको छ । डिपोहरूबाट विक्रेताले पुस्तकहरू जिल्ला/जिल्लामा लैजान थालेका छन् । निषेधाज्ञा भएका जिल्लामा पास उपलब्ध गराएर पाठ्यपुस्तक ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा बिहान ११ बजेसम्म स्टेसनरीहरू खुल्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य जिल्लामा पनि स्टेसनरी खुलाउन पहल भइरहेको अर्यालले जनाए । ‘निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै पाठ्यपुस्तक जिल्लाहरूमा पुग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा पुगिसकेको छैन, शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।’ १ देखि ४ कक्षाका लागि निजी प्रकाशनले पनि बिक्री वितरण गर्ने पाठ्यपुस्तक पनि ढुवानी हुन थालेको केन्द्रले जनाएको छ ।
चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा २, ३, ६ र १२ कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसारका पाठ्यपुस्तक तयार भइसकेको केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । गत वर्ष कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको थियो ।
विद्यार्थीको भर्ना सकिएपछि अनलाइन, अफलाइन, रेडियो, टेलिभिजनलगायत वैकिल्पक माध्यमबाट पठनपाठन गर्न र शिक्षकहरूले सहजीकरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । केन्द्रले मंगलबारबाटै कक्षा १–१० को श्रव्यदृश्य र श्रव्य पाठहरू टेलिभिजन र रेडियोबाट प्रसारण गर्न थालेको छ । गत वर्ष वैशाखको सट्टा असारबाट मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको थियो । अघिल्लोपल्ट दुई महिना ढिला भएकाले चालु वर्षको दुई महिनासम्म लम्ब्याइएको हो ।
गत वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्यासमेत वृद्धि भएको पाइएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा साढे २ लाख अर्थात् ४.६ प्रतिशत विद्यार्थीको संख्या बढेको हो । २०७६ मा ५४ लाख ५९ हजार विद्यार्थी भर्ना भएकामा २०७७ मा सामुदायिक विद्यालयमा ५७ लाख १३ हजार विद्यार्थी थपिएका हुन् । सबैभन्दा बढी कक्षा १–५ मा १ लाख २८ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । कक्षा ६–८ मा ६३ हजार, कक्षा ९–१० मा ४० हजार र ११–१२ मा ५६ हजार विद्यार्थी बढेका छन् ।
लकडाउनका कारण शिक्षण संस्था बन्द हुँदा अभिभावकले बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको, सहर छाडेर गाउँ फर्केका अभिभावकले पनि सरकारी विद्यालय रोजेका कारण संख्या वृद्धि भएको हुन सक्ने केन्द्रको अनुमान छ । निजी विद्यालयमा भने करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी घटेको आकलन छ । काठमाडौं उपत्यका र अरू सहरमा निजी विद्यालयमा विद्यार्थी १५ देखि २० प्रतिशतसम्म घटेको प्याब्सन, एनप्याब्सनले जनाएका छन् ।
ललितपुरस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख रमेशप्रसाद मैनालीले कोभिडका कारण निजी विद्यालय छाडेर सामुदायिकमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या बढेको बताए । ‘राम्रा भनिएका नाम चलेका निजीका विद्यार्थी पनि सामुदायिकमा जान थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अनलाइन पठनपाठन हुने भएपछि निजीमा किन पैसा तिर्ने भनेर पनि स्कुल परिवर्तन गरेका छन्, लकडाउनका कारण मध्यम वर्गीय अभिभावकले निजी छाडेर सामुदायिक रोजेका हुन् ।’ कोरोना महामारी कायमै रहेकाले अझै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रकाशित : असार २, २०७८ १३:२८
लय कायम राख्ने इटालीको उद्देश्य
असार २, २०७८ एएफपी
रोम — इटालीले अहिले लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिहेको छ । युरो २०२० मा बुधबार स्विट्जरल्यान्डको सामना गर्दा इटालीको उद्देश्य यही लय कायम राख्ने हुनेछ । आफ्नो पहिलो खेलमा इटाली टर्कीविरुद्ध निकै बलियो देखिएको थियो ।
तस्बिर : इटाली फुटबल संघ
त्यसमा उसले आत्मघाती गोल मद्दतमा अग्रता लिएपछि सिरो इमोबाइल र लोरेन्जो इन्सिग्नेले गोल गरेका थिए । यो इटालीको लगातार नवौं जित हो । यी सबै खेलमा इटालीले कुनै गोल पनि खाएको छैन ।
अब रोबर्टो मान्चिनीको इटालीले दसौं खेलमा पनि गोल नखाएर जित निकाले यस्तो उत्कृष्ट लय उसको फुटबल इतिहासमै दोस्रोपल्ट मात्र हुनेछ । स्विट्जरल्यान्डले भने वेल्सविरुद्धको आफ्नो पहिलो खेल गोलरहित बराबरी खेलेको थियो । यसपल्ट इटालीको सामना गर्दा स्विस टिमले केही न केही प्राप्त गर्ने उद्देश्य राख्न सक्नेछ । यो गोलका रूपमा हुन सक्छ वा एक अंकका रूपमा । स्विस प्रशिक्षक भ्लादिमिर पेट्कोभिच मान्छन्, यो खेल निकै कठिन हुनेछ ।
उनले भनेका छन्, ‘इटालीविरुद्धको खेल पक्कै फरक हुनेछ । हामीले वेल्सविरुद्ध निकै धेरै आक्रमण बुन्यौं र अवसर बनायौं, तर त्यसबाट खाली एकै गोलमात्र गर्न सक्यौं । यो हाम्रा लागि निराशाजनक रह्यो ।’
मान्चिनीले भने स्विसविरुद्धको खेललाई लिएर भनेका छन्, ‘टर्कीविरुद्ध हाम्रो प्रदर्शन सुन्दर रह्यो । विश्वास गरौं, अबको खेल पनि यस्तै हुनेछ । मलाई लाग्छ, यस्तो नतिजा अझै आउने छ । हामीलाई लामो बाटो तय गर्नुपर्नेछ र यो उपाधितर्फ नै हुनेछ ।’
बाकु– टर्कीले बुधबार समूह ‘ए’ मा वेल्सको सामना गर्दा दुवै टिम आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने उद्देश्यमा हुनेछ । वेल्सले स्विट्जरल्यान्डविरुद्धको आफ्नो पहिलो खेलमा १–१ को बराबरी खेलेको थियो । टर्की भने इटालीको हातबाट ३–० ले पराजित भएको थियो । त्यो खेलमा टर्की कमजोर देखिएको थियो । ‘डार्क हर्स’ मानिए पनि टर्कीले इटालीविरुद्ध यस छविअनुसार प्रदर्शन गर्न सकेन । लगातार दोस्रो हारको अर्थ टोलीका लागि प्रतियोगिताबाट लगभग बाहिरिनु हुनेछ ।
वेल्स भने तुलनात्मक रूपमा केही बलियो स्थितिमा छ । टर्कीले इटालीको सामना गर्नु अगाडि लगातार ६ खेलमा हार बेहोरेको थिएन । वेल्सविरुद्धको खेलमा टर्की केही अगाडि रहेको छ । टर्की वेल्ससँग सन् १९८१ मा पछिल्लो पटक पराजित भएको थियो । यो समूहमा सबैभन्दा बलियो टिम इटाली हो र उसले नै समूह जित्ने सम्भावनाबीच अन्य तीन टिमका लागि बराबरीको नतिजा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्नेछ ।
सेन्ट पिटर्सबर्ग– युरो २०२० को समूह ‘बी’ मा बुधबार फिनल्यान्डले रुसको सामना गर्दा दुवै टिमको मनस्थिति फरक हुनेछ । फिनल्यान्डले युरोमा गरेको डेब्यु खेलमा डेनर्माकलाई हराएको थियो । त्यसमा जोएल फोजानपालो हेडबाट निर्णायक गोल गरेका थिए । अझ त्यसमा गोलरक्षक लुकास हाडेकीले पेनाल्टीमा गोल जोगाएर फिनल्यान्डको जित निश्चित पारेका थिए । भलै, यो खेल क्रिस्टियन एरिक्सनको घटनाले ओझेलमा परे पनि फिनल्यान्ड जितमा खुसी भने छ ।
त्यसको ठीकविपरीत रुस आफ्नो पहिलो खेलमा बेल्जियमसँग ३ गोलले पराजित भएको थियो । त्यसमा रुस आफ्नो विपक्षी टिम अगाडि कमजोर नै देखिएको थियो । युरोमा रुसले आफ्ना पछिल्ला ६ खेलमा जित निकाल्न सकेको छैन, त्यसमध्ये ४ खेलमा पराजित छ । फिनल्यान्डविरुद्धको खेलमा भने रुस अगाडि छ । टोलीले आफ्नो छिमेकीविरुद्ध बेहोरेको एकमात्र हार सन् १९१२ को ओलम्पिकमा सम्भव भएको थियो ।
प्रकाशित : असार २, २०७८ १३:२२
थापाप्रति दाहालको टिप्पणी- 'सम्झिँदा पनि एलर्जी हुन्छ'
ओलीको चुनौती - मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नेले एमालेसँग लड्ने धाक लाउने ?
डडेलधुरामा पुनः वडा अधिवेशन माग्दै रिले अनशन
अरुलाई धेरै भन्दिनँ, बिग्रिएको मै हुँ : दाहाल
प्रधानमन्त्री देउवा हामीले बनाएको घरमा सर्दै हुनुहुन्छ: ओली
वार्ता र संवादबाट संसद् अवरोध हटाउन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आग्रह
अबको कांग्रेस नेतृत्व
शंकर तिवारी आश्विन ७, २०७८
जर्नल अफ डेमोक्रेसी’ ले जनवरी २०२१ को अंकमा मूलधारका पार्टीहरू संकटमा भन्नेबारे विशद चर्चा गरेको छ । नेपालमा पनि गणतन्त्रयताका वर्षहरूमा मूलधारका पार्टीहरू संकटमा पर्दै गइरहेको...
सामाजिक बिमाको अपरिहार्यता
सुरभि भण्डारी आश्विन ७, २०७८
मानौं राजकुमार कास्कीको हेम्जा गाउँको एउटा होटलमा वर्षौंदेखि कार्यरत छन् । उनकी श्रीमती शिवानी घर–खेत गर्दै तीन छोराछोरीको हेरचाह गर्छिन् । एक दिन काम गर्दैगर्दा अचानक राजकुमारका...
जयसिंह धामी र ‘कहिले पराधीन नभएका’ हामी
जनार्दन थापा आश्विन ७, २०७८
गत साउन १५ गते महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले तुइनको डोरी खुस्काइदिादा दार्चुलाका जयसिंह धामीले नदीमा डुबेर ज्यान गुमाउनुपरेको घटनाले बेला–बेला जाग्ने...
‘देश जसरी पनि चलाउन’ पाइन्न प्रधानमन्त्रीज्यू !
सम्पादकीय आश्विन ७, २०७८
सत्ता सम्हालेको अढाइ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमताको द्योतकमात्र होइन, राष्ट्र र नागरिकप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा पनि हो । सरकारलाई पूर्णता दिने विषय प्रधानमन्त्री...
विश्वास गौचन आश्विन ६, २०७८
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता १,००० रुपैयाँ बढाएर प्रतिमहिना ४,००० पुर्‍याए । करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई यस प्रयोजनका...
राजनीतिक स्थायित्वको मृगतृष्णा
सीके लाल आश्विन ६, २०७८
सरकार गठन भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि देउवा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । देश भने स्वचालित संयन्त्रका भरमा चलेकै छ । प्रतिनिधिसभाले अत्यावश्यक अध्यादेशहरूमा छलफलसम्म सुरु गर्न...
‘बेटी बचाऔं’ भनेर मात्र हुन्न
अरुणा उप्रेती आश्विन ६, २०७८
तराईतिर चलेको ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ नारालाई मैले नेताहरूको ‘द्वैध चरित्र’ को द्योतक भन्ने गरेको छु । लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन थालेपछि छोराको अनुपातमा छोरीको...
मानव तस्करीको अर्को आयाम
सम्पादकीय आश्विन ६, २०७८
नेपाल हुँदै अमेरिका लैजाने बहानामा बंगलादेशबाट म्यान्मारका रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई काठमाडौं ल्याइने गरेको पाइनु चिन्ताको विषय हो । प्रहरीले यस्तो कार्यमा संलग्न भनिएका तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको...
अरुण तेस्रो, फास्ट-ट्रयाक र एमसीसी : महत्त्वपूर्ण आयोजना, अतिरञ्‍जित बहस
गोविन्दराज पोखरेल आश्विन ५, २०७८
करिब २४५ वर्ष पहिले पृथ्वीनारायण शाहले स–साना राज्यहरू एकीकरण गरेर सेना, मुद्रा, सरकार भएको देश नेपालीहरूलाई छोडेर गए । त्यति बेला धेरै देश विकासका दृष्टिले...
एनआरएनएको अनलाइन मतदान र विश्वसनीयताको प्रश्न
विश्वनाथ बराल आश्विन ५, २०७८
नेपालीहरूको महान चाड दसैं आउँदैछ । परदेशबाट घरदेश जान नेपालीहरूका लागि दसैंबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण बहाना हुन सक्दैन । केही वर्षयता भने दसैंको छेको पारेर गैरआवासीय...